UPDATE: Burundi oo sheegtay in darsan Askar ah looga laayay gobolka Shabeellaha Dhexe | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Burundi oo sheegtay in darsan Askar ah looga laayay gobolka Shabeellaha...
UPDATE: Burundi oo sheegtay in darsan Askar ah looga laayay gobolka Shabeellaha Dhexe
Ciidamada Burundi ee howlgalka nabad ilaailnta u jooga Soomaaliya
Balcad (Halqaran.com) – Dowlada Burundi ayaa shaacisay tirade askarta looga dilay weerar Al-Shabaab ay ka dambeeyeen oo ka dhacay tuulada Gololey ee duleedka degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Wakaaladda wararka AFP oo la hadashay sarkaal ka tirsan Ciidamadda Burundi ayaa laga soo xigtay in weerarkii duleedka Balcad Axadii ka dhacay lagu dilay 12-askari.
”Nasiib darro 12 kamid ah Ciidamadeena ayaa la dilay lix kalena waa la dhaawacay (Sabtidii) xagjiriinta Al-Shabaab ayaa weerarey kolonyo ka tirsan Ciidamadeena oo ku sii jeeday magaalada jowhar” ayuu yiri sarkaalkan.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in ay dileen 14-askari oo ka Tirsanaa Ciidamadda Burundi ee qeybta ka ah howlgalka Midowga Afrika AMISOM.
Warbaahinta ku hadasha Afka maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab ayaa baahisay in weerar dabagal ahaa oo ka duleedka degmada Balcad ee Gobolka Shabeelaha Dhexe lagu dilay ciidamadda Burundi.
Burundi oo sheegtay
in askar badan looga laayay Shabeellaha Hoose